घरबेटीको प्रस्ताव : मेरो इच्छा पुरा गर भाडा दिनु पर्दैन – Sandesh Press
घरबेटीको प्रस्ताव : मेरो इच्छा पुरा गर भाडा दिनु पर्दैन
January 14, 2022 70
खालि कोठा भएपछि घर भाडामा लगाउन एउटा अनौठो विज्ञापन राखिएको छ । ति विज्ञापनहरूमा घरधनीहरूले भाडामा बस्नेहरु बाट ‘से’ ‘क्स फर रेन्ट’ मागेका छन्। यी विज्ञापनहरूमा ‘से’ ‘क्स फर रेन्ट’ को सुविधा केटीका लागि मात्रै रहेको पनि लेखिएको छ । आयरल्याण्डमा घर नहुँदा भाडा निकै बढेको छ । भाडामा लिनेहरू बढेको मूल्य पूरा गर्न असमर्थ छन् र कम लागत वा नि: शुल्क कोठामा बस्नको लागि यो नाराम्रो काम गर्न बाध्य छन्।
डब्लिनमा भाडामा लिएको घरको विज्ञापनमा लेखिएको थियो, ‘नर्थ डब्लिनमा एउटा कोठा छ। एकल केटीको लागि मात्र खाली छ, जसको भाडा तिर्न पर्दैन, ‘अलिकति रमाइलो’ मात्र गर्नुपर्छ। केटीहरू मात्र सम्पर्क गर्नुहोस्। ,
यस्तै अर्को विज्ञापनमा लेखिएको थियो, ‘सन्ट्री डब्लिनमा एउटा कोठा छ, सहर नजिकै । घर नजिकै कार पार्किङ र बस स्टप सुविधा पनि छ तर केवल सुन्दर र आकर्षक केटीहरूले मात्र सम्पर्क गर्नुहोला।
डब्लिन रेप क्राइसिस सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी नोलिन ब्ल्याकवेलले यस्तो व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो व्यवस्थामा भाडामा लिने अधिकार खोसिएको र समान अधिकार नपाएको उनको भनाइ छ । नोएलिन भन्छिन् कि भाडाको सट्टा से’ ‘क्स एक वास्तविकता भएको छ।
यस्तो भाडाको घरमा भाडामा लिने व्यक्ति आएपछि यो व्यवस्था तार्किक रूपमा सही मान्न थाल्छ । तर सत्य यो हो कि यस्तो यौ’ ‘नस’म्प’र्क स’हम’ति बि’नाको से’ ‘क्स बराबर हो।
नोएलिन भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा घरधनीले नियम बनाएर आफ्नो इच्छाअनुसार यौ’ ‘न सेवा लिने गर्छन् । भाडामा लिने व्यवस्थामा भाडामा लिने कुनै अधिकार छैन। मानिसहरु घर नपाएर वा पैसाको अभावमा यस्ता घरमा आउने गर्छन् ।
भाडामा लिने से’ ‘क्समा भाडामा लिने व्यक्तिले भाडाको घरमा कति समय बस्न पाउने भन्ने सुरक्षा हुँदैन । उनीहरुसँग भाडा सम्झौता पनि छैन । घरबेटीको चाहना पूरा गर्नु मात्रै हो । यस व्यवस्थामा, भाँडादारको इच्छाको कुनै ख्याल राखिएको छैन।
नोएलिन भन्छिन् कि घरधनीले चाहेको बेला भाडामा लिने व्यक्ति उनको अगाडि हाजिर हुनुपर्छ, त्यसैले शो ‘ष’णको सम्भावना हुन्छ।
आवासीय भाडा बोर्डले शुक्रबार एक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो, जस अनुसार भाडा यस वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा २०१७ यता सबैभन्दा बढी बढेको छ। आयरल्याण्डमा औसत मासिक भाडा १ लाख १९ हजार छ। त्यस्तै, डब्लिनमा अहिले औसत भाडा मासिक १ लाख ६३ हजार छ भने लाइमरिकमा ५४ हजारभन्दा अलि बढी भाडा छ ।
गत महिना प्रकाशित एक प्रतिवेदनले नोभेम्बर १ मा देशभर १ हजार ४६० घर मात्र भाडामा उपलब्ध रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनमा एकै वर्षमा ६५ प्रतिशतले भाडाको घरमा कमी आएको बताइएको छ ।
आयरल्याण्डको सरकारले भाडामा लिने सेक्स विज्ञापनको निन्दा गरेको छ र मानिसहरूलाई त्यस्ता कुराहरू रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेको छ। आवास मन्त्री डारेग ओ’ब्रायनले भने, “म यौनको बदलामा सम्पत्ति भाडामा दिइने कुनै पनि घटनाको कडा निन्दा गर्छु। यस्ता विज्ञापन देखिएमा प्रहरीलाई खबर गर्न हामी जनतालाई प्रोत्साहित गर्नेछौं।
Prevरुकुम पश्चिमका प्रहरी हवल्दार रामजी खत्रीको निधन
Nextबज्यो खतराको घन्टी नेपालमा थप ५ हजार ८७ जनामा कोरोना संक्रमण
एकाबिहानै बुद्ध एयरको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो
आमाको कोभिड नतिजा नेगेटिभ, नवजात शिशुको पोजेटिभ भएपछि डाक्टर पनि अचम्मित
नयाँ भेरियन्ट ओ’मिक्रोन सं’क्रमित धमाधम बढ्दै, पूर्ण लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी
अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने! (3518)
दुबई काण्ड: यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित) (2468)